iimoto kunye nesithuthuthu | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: imoto kunye nomlilo
Ukuthengiswa kwe-Infiniti QX80 ehlaziyiweyo ivulwe eRashiya
ezaposwa ngomhla 08.01.2021 08.01.2021
Abameli baseRashiya be-Infiniti baqinisekisile ulwazi malunga nokuvulwa kweentengiso ze-QX80 (ukuhlaziywa kwe-Nissan Patrol). Ukwamkelwa kwee-odolo zangaphambili ze-SUV ziqale malunga nenyanga edlulileyo, ngoku imoto ifike ngokusesikweni kubathengisi.
Hyundai H1 Grand Starex: inkcazo, ifoto
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 28.11.2019
IHyundai H 1 Grand Starex yibhasi encinci yecandelo lemoto yosapho. Ngokomgangatho kunye neempawu zobuchwephesha, iya kukhuphisana neempawu zehlabathi ezinje ngeMercedes, Volkswagen, njl.
ZAZ Vida (ZAZ Vida): ezizodwa zobugcisa. Ukuphononongwa kwabanini
I-Auto ZAZ "Vida" ngumzekelo wezothutho olukhanyayo lobuqu, olwenziwe kokubini emzimbeni we-hatchback kunye ne-sedan. Imveliso enkulu yenziwa ngo-2012. Imoto iyathengiswa eUkraine ...
I-ZIS 110. Imoto yolawulo eSoviet
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 13.11.2019
Car imoto zodidi oluphezulu ZIS-110 wadalwa ngo-1945. Imoto yenzelwe ukukhonza i-Kremlin nomenklatura, urhulumente kunye nabaphathiswa. Imodeli yayisisakhelo esithwala umthwalo wamandla anyukayo, anokukwazi ukumelana ...
I-Kayo 140: uphononongo, imigaqo, iifoto, ukulungiswa
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 29.11.2019
Iibhayisekile zomngxuma ziindlela ezithandwayo kumazwe aseYurophu, kodwa kummandla waseRussia baphathwa ngokumangaliswa okuthile. Inkqubo yolu didi luhlobo lweekopi ezincitshisiweyo zesithuthuthu se-motocross. Ibhayisekile yomhadi ...
Itrektara MTZ 1523: imigaqo kunye nokuphononongwa komnini
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 30.11.2019
I-MTZ 1523 yitrektara yezolimo enamavili ezahlukahlukeneyo eyilelwe ukwenza uluhlu olubanzi lwemisebenzi. Imodeli isetyenziselwa ukulungisa umhlaba wokuhlwayela, wokuhlwayela, wokunyanga izithole, onceda ekuvuneni nase ...
Itrektara T-4А: Iinkcazo zobugcisa, iifoto, ukulungiswa
Itrektara iye yasetyenziswa kakhulu kwezolimo kunye mveliso, baveliswa amashishini amaninzi eSoviet Union. E-Kazakhstan naseSiberia ekude, izixhobo zesityalo seAltai zazisetyenziselwa umsebenzi. Ezi yayizizithuthi ze-T-4, ...
Uqala njani uvavanyo lweToyota: imiyalelo yenyathelo ngenyathelo. Ukuzifumanisa ngokwakho kosasazo oluzenzekelayo "iToyota"
Imoto, njengokuba usazi, zezendlela zokuhamba, kodwa hayi kwizinto zodidi. Nazi iindleko nje zemisebenzi ethile yokuqonda isifo neyokulungisa ikwenza ukuthandabuze oku. Kwiindlela ezininzi oku kuyasebenza nakwi ...
"Mercedes W204": inkcazelo, iinkcukacha, ncomo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 04.12.2019
IMercedes W204 sisizukulwana sesithathu seemoto ezidumileyo eziphakathi kubukhulu kwi-C-class. Umanduleli wayo yayingu-W203. Le moto yaziswa kumajelo eendaba ngo-2007, ngoJanuwari, kwaye sele ngo-Matshi ...
Kuthetha ntoni ibheji yeSkoda? Imbali yelogo
Kuthetha ntoni ibheji yeSkoda? Umbuzo unomdla kwabaninzi. I-logo yenkampani eyaziwayo yaseCzech evelisa iimoto ezihamba nabantu ivusa imibutho eyahlukeneyo. Abanye babona intaka isasaza amaphiko ngakwilizwe, enye itolo elibhabhayo, eminye ...
Izithuthi zaseRashiya kunye nehlabathi. Izixhobo zomkhosi waseRussia
Imikhosi yamazwe yenzelwe ukukhusela kuhlaselo olwahlukeneyo kunye nokugcina imida, kwaye oomatshini bemikhosi babizwa ukuba babancede koku. Kwangelo xesha, bobabini abantu kunye netekhnoloji inxulumene kakhulu ...
History AvtoVAZ. Iinkalo ezithandayo kunye neefoto
Kwiminyaka engama-60 kwinkulungwane yokugqibela, kwaveliswa iintlobo ezininzi iimoto eSoviet Union. "I-Cossacks", "iVolga" kunye ne "Muscovites" ziya kuhlala zikhunjulwa ngabemi belizwe lethu njengelungelo lala maxesha akude. Kodwa kwi ...
Ukufakwa kwenkqubo yokulwa nobusela. Uhlalutyo lweemodeli ezilungileyo kakhulu
Iinkqubo zokulwa ubusela sele zifunwa kakhulu phakathi kwabaqhubi beemoto ixesha elide. Imakethi yaseRussia namhlanje ibonelela ngoluhlu olubanzi lwezixhobo ezichasene nobusela ezivela kubavelisi abohlukeneyo. Nangona kunjalo, ayizizo zonke iimveliso ...
IJeep "Rubicon-Wrangler": iifoto, ukuphononongwa kwabanini, iinkcukacha
Ngexesha leMfazwe yesibini yeHlabathi, inkampani yaseMelika uWillis Motors wenza i-CJ SUV. Imoto ibisetyenziswa ngaphambili nangasemva. Isakhono esinqamlezayo selizwe senza ukuba imoto ibaluleke kakhulu kwiimeko ezinzima zendlela. ...
Ukukhetha kunye neempawu zemoto Chevrolet Cruze Hatchback
I-Chevrolet Cruze yimoto eveliswa yinkampani yaseMelika iGeneral Motors ukusukela ngo-2008. Le moto endaweni iimoto ezimbini: Chevrolet Cobalt kunye Chevrolet Lacetti. ERashiya, baqala ukuhlanganisa kwi mveliso ...
Ukuxhatshazwa kwe-SS20. Ukutshitshiswa kwe-WHA
Kumbuzo othi: "Ngaba imoto ibutofotofo okanye yindlela yothutho?" - ubuncinci zineempendulo. Umntu othile uya kukhetha ukhetho lokuqala, umntu alwesibini, kwaye abanye- bobabini ngaxeshanye. Inyaniso, njengesiqhelo, ...
Kutheni idizili eya ekugqokeni: izibangela, iziphumo. Ukuxilongwa kweenjini ze-dizeli
Iinjini eziqhelekileyo okwangoku zedizili nepetroli. Le yokugqibela wazalwa ngaphambili kakhulu, kodwa ngoku ukuthandwa kwayo iyehla. Iinjini zedizili zisebenza kakuhle kwaye zinemali. Nangona kunjalo, ukuze imoto ...
Ukupeyinta isithuthuthu ekhaya
Nawuphi na umba woyilo onokuhlaziya ukubonakala kwesithuthuthu esidala ngendlela enokuthi, ukuba awujongi kakuhle, usenokungayiboni. Olu tshintsho luphawulekayo kwimbonakalo luquka ukupeyinta. Ewe, umbala omtsha, ivanishi, ...
Page 1 Page 2 ... Page 154 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-78 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-2,533.